Waamicha Uummata Oromoo fi Firoottan Qabsoo Oromoo Maraaf godhame – Welcome to bilisummaa
Waamicha Uummata Oromoo fi Firoottan Qabsoo Oromoo Maraaf godhame
Qabsoon uummata Oromoo Abba biyyummaa isa kabachifachuuf godhu yeroo dheeraaf deemaa jiraachuun isaa ni beekama. Haala kana ilalchisee mata-duree: Qabsoon Ummata Oromoo eessa irra ka’e, har’a maal-irra jiraa, gara fuula duratti maal fakachuu qaba kan jedhuun Workshopii fi marii hawaasaa tokko Kaaba Kalifornia (North California), naannoo Bay area ti qopha’ee jira. Workshopii kana irratti hayyuun seenaa fi qabasoo bilisummaa Oromoo kan ta’ee Prof. Mekuria Bulchaa barrumsa mata-dureen isaa armaan olitti caqafame irrati bal’inaan ni kennu.
Itti dabalees, tarsimoo mootumotiin Impayeera Itoophiyaa dhufaa-darbani itti fayyadamaa turanii fi jiran ilalchisees barruun ni keennama. Koottaa hayyuu keessan irraa wa’ee seenaa saba keessani/qabsoo saba keessani baradhaa, yaada fi gaafii qabdanis dhiyefachuun qooda keessan bahaa.
Guyyaa: Sadaasaa 29, 2014
Sa’aa: 1:00 – 6:00 pm (PT) Bakka: Walda Oromoo Bay Area Tessoo: 100 Hacienda Ave,
Koree qindeesittuu Workshopichaa
Previous Qabsoon Bilisummaa Oromoo garamitti deemaa jirti?
Next IBSA BOORDII OMN IRRAA KENNAME